Blog-Kubvarura: PGA-Auctions | Martech Zone
Mugovera, July 7, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Tom akakumbira kuti ini ndipe blog yake, PGA Aukisheni. Uye ndinofara kusungira! Iyo blog yaTom iri nezve rake eBay bhizinesi uye anoramba akatarisisa pamisheni saka kune vazhinji vanokwikwidza kunze uko uye isu tinofanirwa kumubatsira iye!
Kutanga, ive shuwa yekugadzirisa iyi link pane iyo Tumira neiyi link back kune yangu blog… Kana iwe ukakopa uye unama kubva kuHTML kudzokera kukodhi, dzimwe nguva zvinokanganisa zvinyorwa. Ini ndakagadzirisa iyo yepakutanga kutumira ine mavara… Ikozvino kana ukateedzera iko zvakananga, zvinoshanda.
Nezvikonzero zvekuchengetedza, iwe unofanirwa zvachose simudzira WordPress kunevazvino uye vakuru kuregedzera. Ndakaverenga pane yako blog kuti iwe wakamhanya mune mamwe matambudziko ekuvandudza. Zvichiri zvakadaro here? Iyo 2.0 vhezheni ikozvino yave pa 2.0.10 kana iwe usingakwanise kukwidziridzira ku2.21.
Injini dzekutsvaga dzinofanirwa kuziva nzira yekutenderera yako saiti. Ivo vanoita izvi zvinobudirira kuburikidza nemaviri maturusi. Chishandiso chekutanga irobhoti.txt faira. Ingori faira remavara iro rinokambaira raverenga kuti uzive kwekutarisa uye nekwausingatarise mune yako saiti. Iwe unogona kugadzira iyo faira uchingoshandisa Notepad uyezve FTP'ing iyo kuseva yako uye uchidzikanda muwebhu dhairekitori.
Mushandisi-mumiririri: * Bvumira: / wordpress / wp- Sitemap: http://www.pga-auctions.com/wordpress/sitemap.xml
Nzira inotevera iyo Injini dzekutsvaga dzinotenderera yako saiti iri kuburikidza ne Sitemap. Ini ndinonyanya kuda iyo 3.0b7 Google Sitemap Plugin. Ini ndatozvishandura kuti zviunze kuYahoo! futi uye akatumira kodhi kumunyori asi iye haana kuivaka mune inotevera kuburitsa parizvino. Izvi zvichavaka mepu.
Ikozvino - zvinowana zvinyengeri zvishoma sezvo iwe uine webhusaiti uye NEIYO blog blog. Iwe unogona kusazviziva, asi WordPress 'yazvino kuburitswa izvozvi ine chimiro kwaunogona kugadzira chero peji peji rekumba uye kunamatira yako blog kumwe kumwe kunhu. Izvo zvinogona kukugonesa kufambisa mamwe ako mapeji (FAQ, Policy, nezvimwewo) iwe unofanirwa kune yako blog uye uine WordPress vabate ivo. Iko mukana ndewekuti iwe unogona kuve navo pane yako otomatiki inogadzirwa sitemap! Ini ndinonyatsokurudzira kuita izvi uye kuisa yako WordPress yekuisa mukati chaimo saiti yako dhairekitori!
Unogona kufambisa saiti pasina kukanganisa izvo zvawakatogadzira saka hapana kunetseka ipapo! Kana iwe ukaita izvi, ive shuwa yekugadzirisa yako robots.txt faira kunongedza kune sitemap mune kurudyi dhairekitori.
Iwe unogona zvakare kuda kusanganisa eBay chaimo muWordPress! Muizvi chinyorwa chandakawana, saiti yakashandisa iyo eBay Mhariri Kit kuwedzera an Inventory rondedzero imomo mune yavo WordPress padivi.
Hapana munhu anoda kutora kuraira kubva kune mumwe munhu asingazivikanwe, handiti? Ini ndaizoisa mufananidzo kumusoro pane rako rePeji peji. Kana iri yakanaka (kuseka), ungatoda kuiisa mune yako tema pane peji rega rega. Usave kamera unonyara - vanhu vanonyatso kukoshesa kuziva kuti ndiani blog yavari kuverenga nekutarisa kwavari.
Chinja chikafu chako ku FeedPress uchishandisa iyo WordPress Feedburner plugin kuti iwe ugone kufungidzira kuti vangani vanhu vari kuverenga yako blog kuburikidza neRSS uye isa yako RSS chinongedzo nechiratidzo kumusoro kumusoro padivi rako kuitira kuti vanhu vagone kuzviwana. . Feedburner ine dzimwe sarudzo zvakare, senge email fomu yekunyorera iwe yaunogona kuisa pane yako saiti.
Ini ndataura iyi plugin pa piri mwe matipi: Kuchengeta vanhu vakatenderedza, ini ndinokurudzira iyo Inoenderana Maposi Plugin uye isa zvakabatana zvinoenderana pazasi pechimwe nechimwe chemashoko ako. Nenzira iyi vanhu vanokuwana iwe kuburikidza neKutsvaga Injini vanoverenga zvaunotumira uye kana vasingawani chaizvo zvavanoda, vanogona kunamatira kune zvimwe zvinyorwa zviri pachinhu chimwe chete. Izvi zvichabatsirawo ne kubatanidza kwakadzika Yekutsvaga Injini Chinzvimbo.
Unoziva sei kuti chii icho vanhu vari kuverenga pane yako saiti? Iwe hauna isina yakanaka Analytics package. Ndingakurudzira zvikuru Dzvanya Webhu Analytics. Kana iwe ukawana iyo Pro vhezheni, iwe unogona kudhawunirodha WordPress plugin kuti iwe umuke uye umhanye!
Iwe unozodzidza zvakawanda nekuziva kuti vashanyi vako vari kubva kupi, zvavari kutsvaga, nezvimwe.
Izvo zvese ndezve kuwanikwa, Tom! Isu tinofanirwa kutaurira maInjini ekutsvaga kuti angakuwana sei iwe uye kuverenga nekutsvagisa injini masosi anouya. Iwe unoita basa rakakura rekutumira mifananidzo uye kunyora zvakajeka, zvipfupi zvinyorwa. Zvako mazita ekuremekedza akakosha… hapana mubvunzo kana isu tangowana injini dzekutsvaga kuti zikuwane iwe, yako blog ichatanga kukwira mukuverenga uye yako eBay chitoro mukutengesa!
Tags: Blogclickyebaybatanidzopermalinkzvinyorwa zvakabatanakutsvaka injinichibatisoWordPress
Blog-Kubvarura: SR Coley
Jul 9, 2007 pa 2: 37 AM
Analytics chishandiso chakakosha kwazvo paBlog, zvikasadaro haumbofi wakaziva zviri kuitika neako blog.
Ini ndaive nemablog pasina ma analytics kwegore, kusvikira ndaverenga imwe yeblog blog yakatumirwa seiyi. Ini ndakashandisa Clicky munguva yakapfuura, zvisinei, zvakanakisa zvandingati ndizvo GoStats.com , vane yakazara reproting system.